1n4148: Ihe niile gbasara Silicon General Purpose Diode | Ngwaike efu
Enwere ọtụtụ diodes semiconductor, yana ngwa dị iche iche. Site na diodes rectifier, site na Zener, ruo LEDs na -enwu ọkụ. N'isiokwu a anyị nwere mmasị ngwa elektrọnik ihe, the 1n4148 izugbe diode. Ọ ga -abụ nke anyị na -enyocha n'ihe banyere njirimara ya, anyị ga -egosikwa ụfọdụ ngwa enwere ike.
1n4148 bụ a obere siliki unit nke na -ezobe nnukwu ihe nzuzo nke ị kwesịrị ịma. Akụkụ nwere ike itinye aka na ọrụ gị ma ọ bụrụ na -amasị gị DIY elektrọnik ma ọ bụ bụrụ onye na -eme ya ...
1 Kedu ihe bụ diode semiconductor?
1.2 Ụdị diode
2 1n4148 izugbe diode
2.1 akụkọ ihe mere eme
2.2 Pinout na nkwakọ ngwaahịa nke 1n4148
2.4 Ebe ịzụta 1n4148
Kedu ihe bụ diode semiconductor?
Un diode bụ ngwaọrụ semiconductor nke na -eme dị ka mgbanwe steeti siri ike na otu ụzọ maka ugbu a. Agbanyeghị na enwere ihe dị iche, dị ka LED ma ọ bụ IR diode, nke na -ewepụta ebili mmiri. N'okwu nke mbụ, ọkụ na -ahụ anya nke ụfọdụ agba, ma ọ bụ radieshon infrared. N'aka nke ọzọ, n'isiokwu a, ebe anyị ga -ekwu maka 1n4148, anyị nwere mmasị naanị na ndị na -eme dị ka ndị na -akpaghasị ugbu a.
Okwu diode sitere na Grik, ma ọ pụtara "ụzọ abụọ". N'agbanyeghị nke a, ihe ọ na -eme bụ ihe megidere nke ahụ, ya bụ, ọ na -egbochi nrugharị nke mmiri na -aga n'akụkụ nke ọzọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na enwere ekele na njiri mara njiri mara nke diode, enwere ike ịhụ na ọ nwere mpaghara abụọ dị iche. N'okpuru ụfọdụ ihe nwere ike ịdị iche, ọ ga -akpa agwa dị ka okirikiri mepere emepe (anaghị eme ya), na n'elu ya dị ka obere sekit nwere obere nguzogide eletriki.
Diodes ndị a nwere otu nke ụdị semiconductor P na N. Ha nwekwara ọdụ njikọ abụọ, anode (ezigbo ọdụ) na cathode (ọnụ adịghị mma). Dabere na ụzọ e si etinye ihe ugbu a, enwere ike ịhazi nhazi abụọ:
Polarization ozugbo: mgbe oke nke ugbu a gafere. Ogwe adịghị mma nke batrị ma ọ bụ ike ọkọnọ na -achụpụ elektrọn efu efu site na kristal N na elektrọn na -aga n'ihu nkwụsị PN. Ogwe dị mma nke batrị ma ọ bụ isi iyi na -adọta elektrọn valence site na kristal P (na -akpali oghere gaa na nkwụsị PN). Mgbe enwere ike dị n'etiti ọdụ ụgbọ elu karịrị ike enwere ike na mpaghara ụgwọ oghere, electrons efu na kristal N na -enweta ume zuru oke iji wụba n'ime oghere dị na kristal P na ọwa mmiri dị ugbu a.
Ntughari mgbasa ozi: mgbe ọ na -arụ ọrụ dị ka insulator ma ọ naghị ekwe ka ikuku na -asọ. N'okwu a, polarization ga -abụ ihe megidere ya, ya bụ, isi mmalite ya ga -ebuga n'akụkụ nke ọzọ, na -eme ka elektrọn ugbu a banye na mpaghara P wee tinye ndị elektrọn n'ime nsen. Oghere dị mma nke batrị ahụ ga -adọta elektrọn site na mpaghara N, nke a ga -ewepụta eriri ga -arụ ọrụ dị ka insulator n'etiti njikọta.
N'ebe a, anyị na -elekwasị anya n'otu ụdị diodes. Ihe dị iche na photodiodes ma ọ bụ LED, wdg.
Emebere ihe ndị a dabere na ụkpụrụ nke Nnwale Lee De Forest. Nke mbụ pụtara bụ nnukwu valvụ oghere ma ọ bụ ọkpọ ọkpọ. Ampoules iko thermionic nwere ọtụtụ electrodes nke na -arụ ọrụ dị ka ngwaọrụ ndị a, mana ha na -ewepụta oke ọkụ, rie nnukwu, buru ibu, enwere ike mebie ya dị ka ọkụ ọkụ. N'ihi ya, e kpebiri iji ihe steeti siri ike (semiconductors) dochie ya.
Diodes, dị ka 1n4148, nwere ọtụtụ ngwa. Ha bụ ngwaọrụ ama ama na okirikiri elektrọnik ugbu a yana ụfọdụ ndị na -agbanwe agbanwe ugbu a. N'ezie, anyị ahụworị otu n'ime ike onunu ha mezuru nnukwu ọrụ mgbe ha na -aga site na AC gaa DC. Nke ahụ bụ akụkụ ha dị ka ndị na -emezi ihe, ebe ọ bụ na ha na -agbanwe mgbaàmà sinusoidal ugbu a maka nke na -aga n'ihu n'ụdị pulses site na igbochi nke dị ugbu a n'akụkụ nke ọzọ.
Ha nwekwara ike rụọ ọrụ dịka ndị na -achịkwa ọkụ eletrik, dị ka ndị na -echebe sekit, dị ka ndị na -emepụta mkpọtụ, wdg.
Enwere ike ekewa diode dabere na voltaji ha na -anabata, ike ya, ihe ya (dịka: silicon) na njirimara ndị ọzọ. Ụfọdụ n'ime ụdị kachasị mkpa bụ:
Nchọpụta diode: a maara ha dị ka mgbama dị ala ma ọ bụ kọntaktị ebe. Emebere ha maka iji ya na ikuku dị oke elu na obere oge. Ị nwere ike ịhụ ha abụọ sitere na germanium (ụzọ 0.2 ruo 0.3 volts) na silicon (ụzọ 0.6 ruo 0-7 volts). Dabere na doping nke mpaghara P na N, ha ga -enwe njigide na ire ure dị iche iche.
Igwe nrụpụta diode: ha na -anya ụgbọ ala naanị na mwepụ, dịka m kọwara na mbụ. A na -eji ha ịgbanwe voltaji ma ọ bụ mezie akara. Ị nwekwara ike ịchọta ụdị dị iche iche, nwere ntachi obi dị iche iche na usoro nke voltaji dị ugbu a.
Zener diode: bụ ụdị ọzọ ama ama. Ha na -enye ohere ka mmiri na -aga n'ihu ma na -ejikwa ya dị ka ngwaọrụ njikwa. Ọ bụrụ na etinyere ha ozugbo, ha nwere ike ịkpa agwa dị ka diode nkịtị.
Ikanam. Nke a bụ ekele maka usoro ọkụ eletrik nke oghere na elektrọnị na -ejikọkọta ọnụ iji wepụta ọkụ a mgbe agbasasịla ya.
Schottky diodeA maara ha dị ka mgbake ngwa ngwa ma ọ bụ ndị na -ebu ọkụ. A na -ejikarị silịọnị eme ha, a na -ejikwa mbelata ọkụ eletrik mara ya (<0.25v approx). Nke ahụ bụ, oge ngbanwe ga -adị oke mkpụmkpụ.
Schockley diode: N'agbanyeghị myiri n'aha ahụ, ọ dị iche na nke gara aga. Ọ nwere njikọ PNPN ma nwee steeti kwụsiri ike abụọ (igbochi ma ọ bụ nnukwu ihe mgbochi na iduzi ma ọ bụ nkwụsị dị ala).
Diode Iweghachite Nzọụkwụ (SRD).
Ọdọ diode: A na -akpọkwa ya dị ka Esaki, a na -eji ha dị ka ngbanwe steeti siri ike dịka ha nwere ike rụọ ọrụ na nanoseconds. Nke ahụ bụ n'ihi mpaghara mmekpa ahụ dị oke mkpa yana usoro ebe mpaghara na -eguzogide adịghị mma na -ebelata ka voltaji na -abawanye.
Varactor diode: amachaghị nke ndị gara aga, mana a na -ejikwa ya n'ọrụ ụfọdụ. A na -eji varicap dị ka voltage na -achịkwa ihe mgbanwe capacitor. Ọ na -arụ ọrụ inversely.
Laser na IR photodiode: Ha bụ diodes yiri LEDs, mana kama inye ọkụ, ha na -ewepụta ebili mmiri elektrọnik kpọmkwem. Dị ka ọ nwere ike ịbụ ọkụ monochromatic (laser) ma ọ bụ infrared (IR).
Diode na -ebelata voltaji na -agafe agafe (TVS)- Emebere ya ka ọ gafee ma ọ bụ wepu spikes voltaji ma chebe sekit pụọ na nsogbu a. Ha nwekwara ike chebe megide mwepụ electrostatic (ESD).
Diodes ọla edo doped: ha bụ diodes nke ejiri doom ọla edo doped. Nke ahụ na -enye ha ohere, nke ahụ bụ na ha nwere nzaghachi ngwa ngwa.
Peltier diode: ụdị mkpụrụ ndụ a na -enye ohere njikọta nke nwere ike ịmị ọkụ na jụrụ oyi dabere n'akụkụ ya. Ozi ndị ọzọ.
Avalanche diode: Ha yiri Zener, mana ha na -arụ ọrụ n'okpuru ihe ọzọ a na -akpọ mmetụta oke mmiri ozuzo.
ndị ọzọ: enwere ndị ọzọ dị ka GUNN, ọdịiche nke ndị gara aga dị ka OLED maka enyo, wdg.
1n4148 izugbe diode
El 1N4148 diode Ọ bụ ụdị silicon switching diode. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kacha ewu ewu n'ụwa elektrọniks. Ọ dịkwa ogologo oge, ebe ọ nwere nkọwa dị oke mma n'agbanyeghị ọnụ ala ya.
Aha ahụ na -eso Ndekọ aha JEDEC, ọ bara ezigbo uru maka ịgbanye ngwa ihe ruru ugboro 100 Mhz na oge mgbake nke anaghị adịkarị karịa 4ns.
Texas Instruments kere na 1960 diode 1n914. Mgbe ndebanye aha ya otu afọ gachara, ihe karịrị ndị nrụpụta iri na abụọ nwetara ikike imepụta ya. Na 1968 1N4148 ga -abata na ndekọ JEDEC, na -amalite iji ngwa agha na ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'oge ahụ. Ugbu a enwere ọtụtụ ndị na -emepụta ma na -ere ngwaọrụ ndị a n'okpuru aha 1N4148 na n'okpuru 1N914. Ọdịiche dị n'etiti ha abụọ bụ aha na obere ihe ọzọ. Ha dị iche naanị na nkọwapụta ha dị ugbu a.
Pinout na nkwakọ ngwaahịa nke 1n4148
Ekwentị mkpanaka - Otu nkeji iri ...
1n4148 diode na -abịakarị Edere ya n'okpuru DO-35, jiri envelopu iko axial. Ị nwekwara ike ịchọta ya n'ụdị ndị ọzọ dịka SOD maka ịwụnye elu, wdg.
Ma ịka, ọ nwere naanị mkpọ abụọ ma ọ bụ ọnụ. Ọ bụrụ n’ilee anya eriri ojii dị na diode a, njedebe kacha nso na eriri ojii ahụ ga -abụ cathode, ebe njedebe nke ọzọ ga -abụ anode.
Ozi ndị ọzọ - akwụkwọ data
Ma nkọwa site na 1n4148, ha na -abụkarị:
Oke voltaji n'ihu: 1v ruo 10mA
Opekempe ndakpọ voltaji na tụgharịa leakage ugbu a: 75v na 5 μA; 100V na 100 μA
Oge nkwụghachi azụ kacha: 4nns
Mgbasa ike kachaIke: 500mW
Ebe ịzụta 1n4148
Ọ bụrụ na ịchọrọ zụta diode 1n4148 I kwesịrị ịma na ọ bụ ngwaọrụ dị ọnụ ala, ị nwere ike ịhụ ya na ụlọ ahịa elektrọnik pụrụ iche ma ọ bụ na ịntanetị na mbara dịka Amazon. Dịka ọmụmaatụ, ebe a bụ ndụmọdụ ụfọdụ:
Akpa akpa nwere ụdịdị diodes 300, gụnyere 1n4148
Ngalaba 25 nke 1n4148 diode rectifier
Mkpokọta 50 nke 1n4148
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » 1n4148: ihe niile gbasara diode ebumnobi
Micrometer: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ngwa a